के स्वचालित लिङ्क वेबसाइट खोजी इन्जिन अनुकूलनको लागी खतरनाक छ?
त्यहाँ विश्वास छ कि 2017 मा म्यानुअल लिङ्क बिल्डिंग अप्रचलित हुन्छ. यो अवधारणा धेरै पटक छलफल गरिएको छ, तर अझै पनि, त्यहाँ यसको कुनै स्पष्ट बयान छैन.
सामान्यतया बोलपत्र, म्यानुअल लिंक इजाजत एक सक्रिय स्रोत हो जुन वेब स्रोतको आगमन लिङ्कको संख्या बढाउन प्रयास गर्दैछ।. यो एक समय-उपभोग प्रक्रिया हो जुन धेरै प्रयासहरू चाहिन्छ. म्यानुअल लिङ्क इमारत सामान्यतया लिङ्क उत्पन्न गर्ने कार्बनिक तरिकासँग सम्बन्धित छ.
जब तपाईं शीर्ष रैंकिंग साइटहरु को खोज मा आफ्नो आला तपाईं उन कुराहरु को इंगित गर्छन जसलाई उनलाई इंगित गर्दछ - estilo exclusivo 2015 form. तिनीहरूको उच्च र मध्यम प्राधिकरण वेब स्रोतहरूबाट आउने सयौं हजारौं लिंकहरू छन्. निस्सन्देह, उनीहरूको लिङ्क प्रोफाईल रातभर चल्दैन. यी शीर्ष स्तर निर्धारण साइटहरू स्मार्ट काम गरेर यस्तो नतिजा प्राप्त गर्दछ र म्यानुअल रूपमा आउने लिङ्कहरू सिर्जना गर्दछ.
यस आलेखमा, हामी म्यानुअल र स्वचालित लिंक निर्माण प्रविधिहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं. यसबाहेक, हामी कसरी छलफल गर्नेछौं कि Google ले प्राकृतिक र अनौपचारिक लिंक निर्माण परिणामहरू बीच रेखा कसरी आकर्षित गर्छ. म सबैभन्दा उपयोगी मैन्युअल र स्वचालित ब्याकलिङ्क रणनीतिहरू सूचीबद्ध गर्न जाँदैछु जुन राम्रो एसईओ परिणामहरू प्रदान गर्नेछ.
कसरी मैनुअल लिङ्क इमारतले तपाईको साइट रेटिङलाई सुधार गर्न सक्छ?
हाम्रो दिन सिर्जना गर्ने लिङ्कहरूमा डिजिटल बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धा र लगातार खोजी इन्जिन एल्गोरिदम परिवर्तनहरू भन्दा बढि भन्दा कडा कठिन हुन्छ।. कुन लिङ्क निर्माण प्रविधि Google ले आज अनुमोदन गरेको कल भोलि स्पैम रणनीति हुन सक्छ. तथापि, यी सबै नकारात्मक कारकहरूको बावजूद, ब्याकलिङ्क अझै पनि ड्राइभिंग बलको नेतृत्व गर्दै छन् जुन तपाईंको साइट रेटमा सुधार गर्न र तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक उत्पन्न गर्न सक्छ. वेबमास्टर्स जो कार्बनिक लिङ्कहरू सिर्जना गर्न धेरै समय खर्च गर्न चाहँदैनन् स्वचालित रूपमा लिङ्क इमारत सफ्टवेयरको सन्दर्भमा वा भुक्तानी लिङ्क निर्माण अवसरहरू खोज्दै. तथापि, एक अभ्यास को रूप मा, प्राकृतिक लिंक इमारत भन्दा राम्रो छैन. तपाईं धोखाधड़ी लिङ्क निर्माण प्रविधिहरूमा संलग्न हुन हुँदैन किनभने यो वास्तवमा गुगल द्वारा पत्ता लगाइनेछ. अब हामी सर्च इन्जिन अनुकूलन को नयाँ किनारा मा रहछन र कम गुणवत्ता वाला स्पैमी बैकलिंक प्राप्त गर्न सक्छन् तपाईंको सबै एसईओ को प्रयासहरु लाई साथ नै ब्रान्ड प्रतिष्ठा को तबाही गर्न सक्छ।.
मैन्युअल लिङ्क इमारतको विरुद्ध स्वचालित एक
को लागी निम्न गुणस्तर लिङ्क निर्माण युग समाप्त भयो,. यसैले हामी केहि प्रभावकारी मैन्युअल लिङ्क निर्माण प्रविधिहरू भेला गर्छौं जुन तपाईंको पक्षमा काम गर्नेछ.
फोरम र ब्लग टिप्पणिहरु
लिङ्क प्राप्त गर्ने एक सरल र प्रभावकारी तरीका हो, जबसम्म तपाई तिनीहरूलाई प्रासंगिक र उच्च PR वेब स्रोतहरु. तपाईंका टिप्पणीहरू छलफल छलफलसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ र अरूलाई प्राकृतिक रूपमा हेर्नुपर्दछ. यदि टिप्पणी म्यानुअल रूपमा बनाइएको छ भने Google ले तपाइँको साइटलाई दण्डित गर्दैन. यदि यो मैन्युअल रूपमा गरिन्छ भने, यो तार्किक लगाउँदछ, बिन्दुमा लकरहरू र अन्य पाठकहरूलाई मान राख्छ. यद्यपि, Google वेबमास्टर दिशानिर्देशहरूको अनुसार, पोस्ट वा हस्ताक्षरमा अनुकूलित लिङ्कहरूसँग फोरम टिप्पणीहरू गुणस्तरको रूपमा गणना गरिनेछ र रद्द हुनेछन्।.
एक अन्य प्रभावी लिंक बिल्डिंग रणनीति जो कि हमेशा काम गर्दछ अतिथि ब्लगिंग. केहि वेबमास्टरहरूले यो लिङ्क सिर्जना गर्ने स्प्यामी रणनीतिको दावी गर्छन्. तथापि, सत्यलाई भने, यदि यो सही भएमा, यसले सकारात्मक अनुकूलन परिणाम ल्याउनेछ. म विजेता अप्टिमाइजेसन अभियानको भागको रूपमा प्राधिकृत अतिथि ब्लगिंग बारे कुरा गर्न जाँदैछु. तपाईंले आफ्नो साइटको स्तर सुधार गर्न केवल एक इरादा संग सामग्री सिर्जना गर्न आवश्यक छ, तर आफ्नो पाठकहरूमा मूल्य ल्याउन इरादाको साथ. यदि तपाईले तपाइँको सामग्रीलाई पाठकलाई मनमा राख्नुहुन्छ भने, तपाईले अतिथि ब्लगिङलाई सुरक्षित म्यानुअल लिंक निर्माण प्रविधिको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ.